Khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerar lagu qaaday xero ciidan ee Cadan oo kordhay… – Hagaag.com
Khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerar lagu qaaday xero ciidan ee Cadan oo kordhay…
Posted on 2 Agoosto 2019 by Admin in World // 0 Comments
Khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerar shalay lagu qaaday fariisin ay leeyihiin ciidanka amniga Yemen ee ku sugan koonfurta magaalada xeebta ah ee Cadan ayaa korortay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha Caafimaadka.
Xero milatari oo ay leeyihiin ciidanka amniga ee taageerada ka helaya xulufada Sacuudiga ayaa waxaa ku dhintay 47 ruux kadib markii gantaalo xoogan ay ku garaaceen dagaalyahanada mucaaradka ee kooxda Xuutiyiinta, sida ay qoreen warbaahinta Gudaha.
Balse saraakiisha dowlada Yemen ayaa beeniyay dhimashada tiradaan waxaana ay sheegeen in 36 askari ay ku dhinteen weerarkii dhacay Khamiistii Shalay.
Weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa markii hore ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday xerada ciidanka kuwaasi oo ku guda jiray tababar waxaana ku dhintay 11 askari ka hor inta aan duqeymo xoogan lagu Garaacin.
Afhayeenka kooxda Xuutiyiinta Yemen Yehia Sarea oo la hadlay warbaahinta kooxdaas taageerta ee Al-Masriyah ayaa sheegay in weerarkaan ay ku dileen askar iyo saraakiil sare oo ka tirsanaa milatariga Yemen.